अधिक आनन्दको लागि यौन सम्बन्ध - Younka Kura
written by YounKaKura January 4, 2018
सम्भोग भावनात्मक संवेगविना सम्भव हुँदैन । न्यूनतम यान्त्रिक प्रक्रियासँग अधिकतम भावनात्मक संवेगहरूको समन्वयबाट पनि सम्भोग सम्भव हुन्छ । एक अर्थमा यान्त्रिक प्रक्रियाविना पनि सम्भोग हुन सक्तछ । तर मैथुनमा अधिकतम यान्त्रिक प्रक्रियासँग न्यूनतम भावनात्मक संवेगको समन्वय भएमात्र पुग्दछ । यस अर्थमा मैथुन यान्त्रिक विधिप्रधान प्रक्रिया हो । मैथुनमा शरीर र मन एकाकार हुनु जरुरी हुँदैन । शरीर र मन एकाकार नभए सम्भोग हुँदैन । मैथुनको प्रयोजन सन्तानप्राप्ति हो । सम्भोगको प्रयोजन पुरुषतत्व र नारीतत्वबीचको प्रेमको भौतिक अभिव्यक्ति हो । दोहोरो मानसिक संलग्नताविनाको सम्भोग मैथुनमात्र हो । विधिको मात्र महत्व रहने हुनाले मैथुन एकोहोरो पनि हुन सक्तछ । – डा.सुबोधकुमार पोखरेल “सृष्टिको रोमान्स”
यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन । केही अपवादबाहेक सबै मानिस यौनकार्यमा सहभागी हुन्छन् । कसैले विवाहपछि सेक्स गर्छन् भने कसैले विवाहअघि नै गर्छन् । हुन त हाम्रो समाज अझै पनि यौनको मामिलामा खुलेर कुरा गर्नसक्ने खालको छैन । त्यसैले गर्दा पनि हामी समाजमा यौनसम्बन्धी कुरा गर्न डराउँछौं ।
त्यसैले यौनजीवनका बारेमा हामीमध्ये कति भ्रममारहेका पनि हुन्छौं । यौन सम्बन्धलाई लिएर हामीमा केही कौतुहल हुनु पनि नकारात्मक कुरा होइन । विवाहको उमेर पुगेकाहरु र विवाहको तयारीमा रहेकाहरुलाई विवाहको पहिलो रात आफू पूरै सफल हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर चिन्ता हुने गर्छ । विवाहको रातको विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु नर्भस पनि हुने गर्छन् । विवाहको रात कस्तो महसुस हुन्छ के यो सुखद् अनुभव हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरुले दिमागमा डेरा जमाउन पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा त यस्तो पनि हुन्छ कि सेक्स दुःखद् र पीडादायक हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका जोडी पनि हुन्छन् र उनीहरुलाई सेक्स कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे पनि थाहा हुँदैन । कतै तपाईंलाई पनि यस्तै समस्याले सताएको त छैन ? छ भने पनि चिन्तित नहुनुहोस् ।
यहाँ हामीले केही टिप्स तपाईंलाई दिँदैछौँ– कसरी आफ्नो विवाहको पहिलो रातलाई आनन्ददायक, सुखी र यादगार बनाउने ।
१. तपाईं आफ्नो विवाहको पहिलो रात यादगार र आरामदायक बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुवात पनि बिस्तार बिस्तारै गर्नुहोस् । आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस् । रमाइला कुराकानीबाट सुरुवात गर्नुहोस् र केही समय एकअर्काको साथमा रमाउनुहोस् । फेरि बिस्तारै आलिंगन हुँदै चुम्बन र अधरपानतर्फ अगाडि बढ्नुहोस् ।
२. तपाईं आफूलाई पनि आनन्ददायक वातावरण बनाउनुहोस् र पार्टनरको पनि इच्छा बुझेर अगाडि बढ्नुहोस् । दुवैलाई भरपूर आनन्द हुने किसिमले सुरुवात गर्नुहोस् ।
५. कहिलेकाहीं महिला बढी आत्तिएको वा चिन्तामा डुबेको अवस्था छ अथवा महिलालाई पीडाको अनुभूति भएको अवस्था छ भने लामो श्वास लिन र छोड्न लगाउनुहोस्, यसले महिलालाई केही आराम प्रदान गर्न सक्छ ।
६. तपाईं पहिलो पटक यौन सम्पर्क राख्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, यौन सम्बन्धमा प्रेमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले प्रेमपूर्वक अगाडि बढ्नुहोस् ।
७. सेक्स गर्दाको समयमा आफ्नो पार्टनरसँग तालमेल मिल्नु एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले तपाईंको मनमा रहेका डर तथा भ्रमहरु वा जरुरी कुरा जुन तपाईंलाई गर्न मन छ, लाई सेक्सभन्दा अगाडि नै आफ्नो पार्टनरसँग सेयर गर्नुहोस् ।
८. सेक्समा विश्रामले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यसैले पनि आफ्नो पार्टनरलाई आफूप्रति पूर्णरुपमा हाबी हुन नदिनुहोस् नत आफू नै आफ्नो पार्टनरप्रति पूर्णरुपले हावी नै हुनुहोस् ।